Show All Most Popular Cutlery Lunch Box Dinner Box Light & Snack Pizza Cake & Pasta Vege Fried Rice Rice Curry Dhal
Light & Snack
No.150, Nguwar Street 1st floor,, Yangon, MM Ahlone
Only Vegetarian & Vegan Restaurant. MSG Free.
No.150, Nguwar Street 1st floor,, Yangon, MM Ahlone ကြက်ဥမပါတဲ့ လုံးဝ Pure veg လုံးဝသတ်သက်လွတ်စစ်စစ် ဖြစ်တာမို့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာစားသုံးနိုင်ပါတယ်... ✅အခုမှာတဲ့order ကို အခု ချက်ချင်းလတ်လက်ဆက်ဆက် ချက် တာ မို့ ပိုလည်းအရသာရှိတယ် ပိုလည်းစာကောင်းတယ်။ ဟင်းလျှာလေးတွေကို အားပေးကြလို့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ အချိုမှုန့်/ စားအုန်းဆီ မသုံးပါ...ဟင်းရွက်ဆီ သန့် သန့် ကိုသာအသုံးပြုထားပါတယ် ... တန်းမြင့်အရည်အသွေး premium quality ဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် သေချာစိစစ်ချက်ပြုတ်ထားပါတယ်။
Paneer Chilli (နို့ခဲငရုတ်ပွဟင်း)
Potato Puri (အာလူးပူရီ)
Plain Chapati ( ချပါတီ)
Ladies Finger Masala (ရုံးပတီသီးနှပ်)
Plain Rice (ထမင်းဖြူ)
Cholay Masal (ကုလားပဲလုံးဟင်း)
Arloo Paratha (အာလူးချပါတီ )
Paneer Chapati (နို့ခဲချပါတီ)
Pizza Preparation time will be 1 hour.
Colourful Chilli Pizza
Plain Cake (ကိတ်ရိုးရိုး)
Chocolate Cake (ချောကလက်ကိတ်)
Butter Cake (ထောပတ်ကိတ်)
Fruit Cake (သီးစုံကိတ်)
Vege Fry Noddle (ခေါက်ဆွဲကြော်)
Vege Vermicelli (ကြာဇံကြော်)
Masalar Fried Rice (မဆလာထမင်းကြော်)
Shan Rice Salad ( ရှမ်းထမင်းချဉ်)
Maida Hot & Sour (ဂျုံဟင်းချဉ်စပ်)
Maida Capsicum ( ဂျုံဟင်းငရုတ်ပွချဉ်စပ်)
Maida Potato (ဂျုံဟင်း+အားလူးဆီပြန်)
Panner with Green Peas (နို့ခဲ+ပဲစိမ်းလုံးဆီပြန်ဟင်း)
Mix Vegetable (သီးစုံးဟင်း)
Tofu Hot & Sour (ပဲပြားချဉ်စပ်)
Mushroom Masala (မှိုဟင်း)
Potato Masala (အာလူးမဆလာ)
Plain Dhal (ပဲဟင်း)
Dhal Makani( ပဲတီစိမ်းထောပတ်)